गोकुल बाँस्कोटाको टिप्पणी : केपी ओली नमा`रे कांग्रेसले नजित्ने रहेछ – Purba Aawaj
गोकुल बाँस्कोटाको टिप्पणी : केपी ओली नमा`रे कांग्रेसले नजित्ने रहेछ
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २९, २०७८ समय: २:५१:३७
काठमाडौं, २९ जेठ । नेकपा (एमाले) का प्रभा`वशाली नेता, सांसद तथा पूर्वमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि
कुनै भया`नक ष`ड्य`न्त्र हुँदै रहेछ भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । कांग्रेसका बाग्मती प्रदेश सांसद नरोत्तम बैद्यले प्रधानमन्त्री ओलीवि`रुद्ध आफू नाथुराम गो`ड्से बन्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि बाँस्कोटाको यस्तो भनाई आएको हो ।
नेता बाँस्कोटाले भनेका छन्-केपी ओली नमा`रे कँङ्ग्रेसले नजि`त्ने रहेछ, प्रधानमन्त्री माथि कुनै भया´नक ष´डय´न्त्र हुदै रहेछ। नत्र प्रदेश सांसद त्यो पनि पशुपतिनाथ रहेको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले यस्तो कसरी बोल्न सक्छ? ओली बिरो`धी गठब`न्धन नै यसमा सा`मेल त छैन? काँङग्रेसको आधिकारिक भनाई चाहिन्छ। एमालेहरु सचेत बन।”
महेश बस्नेतको प्रश्न : गान्धीलाई जस्तै केपी ओलीलाई मा`र्ने ष`ड्य`न्त्र कांग्रेसले बनाएको हो त ?
बैद्यले प्रदेशसभाको आजको बैठकमा यस्तो भनेका थिए-“खड्गप्रसाद ओलीलाई नरोक्ने हो भने उनले यो देश खाइदिन्छन्। त्यसैले मेरो आग्रह छ, अब कोही नाथुराम गोड्से बन्न तयार हुनुपर्यो मुलुक बचाउनलाई, कोही नाथुराम बन्न तयार छैन भने म बन्छु।” रिपोर्टर्स नेपाल बाट
Last Updated on: June 12th, 2021 at 2:51 am